Thermoforming Machine, Plastic Cup Kugadzira Machine - GTMSMART
GTMSMART Machinery Co., Ltd.ibhizimusi repamusoro-soro rinobatanidza R&D, kugadzira, kutengesa uye sevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisiraOtomatiki Thermoforming Machine uye Plastiki Cup Thermoforming Machine, Plastic Vacuum Kugadzira Machine, pepa mukombe muchina, pepa ndiro muchina, pepa ndiro muchina etc.Isu tinoshandisa zvizere iyo ISO9001 manejimendi system uye nekunyatso tarisa iyo yese maitiro ekugadzira. Vashandi vose vanofanira kudzidziswa unyanzvi vasati vashanda. Yese yekugadzira uye kugadzira maitiro ane yakasimba sainzi tekinoroji zviyero. Chikwata chakanakisa chekugadzira uye yakakwana yemhando sisitimu inovimbisa kurongeka kwekugadzirisa uye kusangana, pamwe nekugadzikana uye kuvimbika kwekugadzira.
Plastic vacuum Kugadzira Machine: Kunyanya kugadzirwa kwemhando dzemidziyo yepurasitiki (zai tireyi, chigaba chemichero, midziyo yepasuru, nezvimwewo) ine thermoplastic sheets, senge APET, PETG, PS, PSPS, PP, PVC, nezvimwewo.
Plastiki Cup Thermoforming Machine
Cup Thermoforming Machine Kunyanya kugadzirwa kwemidziyo yepurasitiki yakasiyana (jelly makapu, makapu ekunwa, mapakeji emidziyo, nezvimwewo) ine thermoplastic sheets, sePP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, nezvimwewo.
Uyu muchina we thermoforming unoshandiswa kugadzira yakakwira kudiwa kwechikafu chinyoro/chimbichimbi chinoraswa, kapu dzepurasitiki yemichero, mabhokisi, ndiro, mudziyo, uye mishonga, PP, PS, PET, PVC, nezvimwewo.